Horjooge ka tirsanaa Al-Shabaab oo isa soo dhiibay | KEYDMEDIA ONLINE
Horjooge ka tirsanaa Al-Shabaab oo isa soo dhiibay
Horjooge ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab ayaa isku soo dhiibay ciidamda dowladda ee fadhigoodu yahay Galmudug, halkaas oo bilihii u dambeeyay ay ka socdeen weeraro u dhaxeeya labada dhinac.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Horjooge ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab ayaa isku soo dhiibey ciidanka xoogga Dalka ee ku sugan jiida hore ee Magaalada Bacaadweyne, kaddib markii uu xiriiro lasoo sameeyay saraakiisha Guutada 13-aad, Qaybta 21-aad ee qaybta ka ah howlgalada culus ee Al-shabaab looga saarayo degaannada dhuumaaleysiga ay ku joogaan ee aagga Camaara.
Horjoogahan oo uu magaciisa Af-garashadu ahaa Cabdiqani, ayaa sheegay in uu ka tanaasulay fikirkii gurracnaa ee Argagixisada, wuxuuna codsaday in la cafiyo, haatanna uu diyaar u yahay in uu la dagaallamo Al-Shabaab.
Cabdule Xuseen Maxamuud, oo loogu yeeri jiray (Cabdiqani), ayaa sheegay in uu Al-Shabaab ugu soo baxay xasuuqa ay u geysanayaan ummadda muslimiinta ah ee Soomaaliyeed, Dadkuna ay macna la'aan ku gowracayaan, isla maraakan uusan waxba ka qaban karin.
Inta badan horjooge -yaasha kasoo goosta kooxda Al-Shabaab qaarkood ayaa waxay ugu soo biiraan ciidamada dowladda howlo shaqo, iyagoo warbixinno siiya kooxdooda, mararka qaarna waxay fuliyaan weerarro lagu qaadayo shakhsiyaad ka tirsan mas'uuliyiinta dowladda, waxaana inta badan lagu eedeeyaa miinooyinka lagu dhajiyo gawaarida madaxda in ay qeyb ka qaataan askarta soo goosta ee iyagoo aan tababar iyo dhaqan celin midna loo sameyn lagu dhex daraa ciidamada dowladda.
Ma ahan markii ugu horreysay uu askari ama horjooge ka tirsan Al-Shabaab uu isu soo dhiibo ciidamda dowladda.